ကြာသောလေ့ကျင့်ခန်း — ခရီးစဉ်လီ - တရားဝင် SITE ကို
ငါ့အသက်ကိုတစ်လျှောက်လုံး, ငါတကယ်ထွက်လုပ်ကိုင်ဖို့လှုံ့ဆော်ခဲ့ကြရတယ်သောအခါငါရာသီအားဖြင့်ကွယ်ပျောက်ပါဘူး. ငါအထက်တန်းကျောင်းတုန်းကကိုယ့်မိန်းကလေးများအထင်ကြီးဖို့လုံလောက်တဲ့ရိုက်ကူးဖြစ်ချင်တယ် (ငါပျက်ကွက်). ငါ၏အမင်္ဂလာဆောင်ရှေ့တော်၌ထိုလများတွင်ငါသည်ငါ့ပျားရည်ဆမ်းခရီးကမ်းခြေကိုယ်ခန္ဓာအပေါ်လုပ်ကိုင်ဖို့ကြိုးစားနေခဲ့. ဒီရက်ပိုင်းတွေမှာ, ကိုယ့်တာသေချာပါငါသည်ငါ့နှစ်ဆယ်ကျော်အတိတ်နထေိုငျအောင်ကြိုးစားနေတာပါ. အကြှနျုပျ၏တွန်းအားနှစ်ပေါင်းများစွာပြောင်းလဲပြီ, ဒါပေမယ့်အဘယျသို့ပြောင်းလဲသွားမမူသောသူတို့တွန်းအားဘယ်လောက်အပွောငျးအလဲဖြစ်ပါသည်.
ဒီတစ်ခါလည်းသင်သဘာဝကျကျနေ့ရက်တိုင်းဟာသူတို့ရဲ့လေ့ကျင့်ရေး regimen ၏ pics နှင့်ဗီဒီယိုများကို post မူသောငါ့မိတ်ဆွေတွေထဲကထွက်-ကြွေးကြော်လုပ်ကိုင်ဖို့လှုံ့ဆော်နေ. သင်တို့မူကားငါကဲ့သို့သောဆိုရင်, သင့်ရဲ့တွန်းအားတစ်ခု trampoline အပေါ်တစ်ဦးသည်ဆိတ်သငယ်နှင့်တူတက်ဆင်းသွား. သင့်ရဲ့အလုပ်ထုတ်ခြင်းမှရလဒ်များကိုအစဉ်အမြဲကြာလျှင်အဘယျသို့, သော်လည်း? သင်ပိုမိုလှုံ့ဆော်ဖြစ်ပါ့?
ကြိုးစားအားထုတ်မှုဟာ Off ပေးဆောင်
ငါလျှပ်စီးအမြန် bobsledders နှင့် highflying နှင်းလျှောဘုတ်ပြားစောင့်ကြည့်အဖြစ်ဆောင်းရာသီအိုလံပစ်ပွဲတော်ကာလအတွင်းပြီးခဲ့သည့်လကငါကိုကွောကျရှံ့ခဲ့. ငါသည်သူတို့၏အားကစားထူးချွန်သဖြင့်အထင်ကြီးခဲ့, ငါကအဲဒီကိုရောက်ဖို့မယူကြပြီရစည်းကမ်းလေ့ကျင့်ရေးစဉ်းစားကြသောအခါငါမူကား ပို. ပင်စွဲမှတ်ခဲ့.
ထိုအောင်မြင်သောအားကစားသမားဆုရရဲ့စင်မြင့်ပေါ်မှာရပ်သောအခါအသီးအသီးအဖြစ်အပျက်၏အဆုံးမှာ, သူတို့၏မျက်နှာများနှင့်ဆုတံဆိပ်အပေါ်အပြုံးများသူတို့၏ရင်ဘတ်အနားယူနှင့်အတူ, သူတို့လေ့ကျင့်ရေး၏အကျိုးကျေးဇူးများရိတ်ခဲ့သည်. ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာနှင့်အညီ, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေ့ကျင့်ရေးအချည်းနှီးသောကွောငျ့လေ့ကျင့်ရေးမတစ်ဦးထက်သာလွန်ကြင်နာရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်ကန့်သတ်မယ့်အကြောင်းကြောင့်.
သငျသညျဘုရားသခင်သည်သင်၏လေ့ကျင့်ခန်းအကြောင်းထင်သောအရာကိုအစဉ်အဆက်အံ့ဩပါဘူးဆိုရငျ, ဒီမှာအဖြေကိုဖွင့်: သူကအကျိုးရှိပါတယ်ထင်, ဒါပေမယ့်ကန့်သတ်, အဘိုး. ဒါကြောင့်သင်အပြေးနေစဉ်တွင်, စစ်ရေးလေ့ကျင့်လုပ်နေတာ, နှင့်အလေးရုပ်သိမ်းပေးရေး, ထိုသို့ပြုမှကောင်းတစ်ဦးအရာရဲ့သိကျွမ်းခြင်း၌ကြွင်းသောအရာ. ကောင်းသောအသွင်သဏ္ဌာန်၌သင်တို့၏ကိုယ်ခန္ဓာ Keeping ခြီးမှမျး-ပင်ဖြစ်ပါသည်ပညာရှိသ-ပေမယ်သာယခုအထိသငျသညျအရင့်.
"သို့သော် irreverent နှင့်ရီစရာဒဏ္ဍာရီနှင့်အတူလုပ်ဖို့ဘာမှမရှိ. ထက်, မွေ့လျော်ခြင်း၌ကိုယ်ကိုလေ့ကငျြ့ပေး, ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လေ့ကျင့်ရေးဘို့ကန့်သတ်အကျိုးကျေးဇူးရှိပါတယ်, ဒါပေမဲ့မွေ့လျော်ခြင်းတိုင်းလမ်းအတွက်အကျိုးရှိ, ဒါကြောင့်ပစ္စုပ္ပန်ဘဝအဘို့နှင့်လည်းအသက်ကိုလာရန်အဘို့အဂတိတော်ကိုရရှိထားသူကတည်းက." (1 တိမောသေ 4:7-8)
ငါတို့သည်ဤကဲ့သို့အလုပ်လုပ်အပေါ်ပေါလုရဲ့အကြံအစည်တက် Sum နိုင်: ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေ့ကျင့်ရေးကောင်းလှ၏, ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာလေ့ကျင့်ရေး သာ. ကောင်း၏. ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအစွမ်းသတ္တိကိုယာယီစျသောကွောငျ့ထိုင်, မွေ့လျော်ခြင်းအားဖြင့်ထာဝရနေစဉ်. ပေါလုက "မွေ့လျော်ခြင်းအဘို့အလေ့ကျင့်ရေး" အကြောင်းပြောသွားတဲ့အခါငါသူသည်သင်တို့ဝိညာဉ်ရေးအားကောင်းပါစေသောအရာတို့ကိုကျင့်ကိုကျင့်ကိုဆိုလိုသည်ထင်. ဒါဟာသင်ပိုမိုဘုရားသခင်၏အလိုတော်နှင့်ညီသောလုပ်ဆောင်မှုများအတွက်ပါဝငျခွငျးကိုဆိုလို. ဒီတစ်ခါလည်းကမျြးစာရုပ်သိမ်းပေးရေးပင်လျော့နည်းနှစ်လိုဖွယ်တစ်ဦးအလေးချိန်ရုပ်သိမ်းပေးရေးထက်, ဒါပေမယ့်လျစ်လျူရှုထားကောငျးကနျြးမာရေးထက်ပိုပြီးအပေါ်ထွက်လက်လွတ်ဆိုလိုသည်.
အစဉ်အမြဲ A Moment ထက် သာ. ကောင်း၏ Is
ငါတို့ရှိသမျှသည်အရာတစ်ခုခုကိုကြာကြာကြာတဲ့အခါပိုပြီးနှစ်လိုဖွယ်ရဲ့သိ. အဘယ်သူမျှမကအောက်ပါလဖြိုဖျက်လိမ့်မယ် သိ. ကားတစ်စီးဝယ်ယူ. ငါတို့သည် သာ. ခဏတစ်ကြာရှည်ခံကြောင်းအရာတစ်ခုခုကိုမဝယ်ချင်ပါတယ်, ကျနော်တို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုထဲကပိုပြီးရလိမ့်မယ်ကွောငျ့,. ငါတို့မူကားဒါကြောင့်ကားများနှင့် ပတ်သက်. ဆုံးဖြတ်ချက်များကိုနှင့်အတူတွက်ချက်နေလျှင်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်နှင့် ပတ်သက်. မည်မျှပိုပြီးတွက်ချက်ဖြစ်သင့်?
ဘယ်လိုမကြာခဏသင်သည်သင်၏ထာကိုစဉ်းစားကြဘူး? အဆိုပါအမှန်တရား, ငါတို့သည် သာ. ကြှနျုပျတို့ပွုထက်ကအကြောင်းစဉ်းစားသင့်ပါတယ်. ကြှနျုပျတို့အားလုံးအစဉ်အမြဲအသက်ရှင်လိမ့်မည်မမေးခွန်းရှိပါတယ်; မေးခွန်းကအစဉ်အမြဲကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မည်ကားအဘယ်သို့. ထို့ကွောငျ့ကြှနျုပျတို့ယခုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေလုပ်သင့်တယ်, အကျိုးဆက်များကိုအဆုံးသတ်ဘယ်တော့မှလိမ့်မည်ဟု သိ..
ဒါကကျနော်တို့တနေ့အပေါ်အာရုံစူးစိုက်သောအရာကို impact သင​​့်တယ်. အားကစားကောင်းပါတယ်, ဒါပေမဲ့သူတို့အရာအားလုံးမဟုတ်ပါဘူး. သင့်ရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအစွမ်းသတ္တိကိုကောလိပ်ကျောင်းသို့သငျသညျရစေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်ကောင်းကင်သို့သငျသညျမရဦးမည်. သင်သည်သင်၏ကိုယ်ခန္ဓာ၏ကောင်းသောစောင့်ရှောက်မှုယူသင့်တယ်, ငါတို့မူကားအဘို့ဂရုစိုက်ဖို့လေးသောအရာတစ်ခုခုများ. သင်တို့၏ဝိညာဉ်ကိုဘယ်လိုကျန်းမာ?
ဘုရားသခငျသညျအကြှနျုပျတို့အပွစျ၏သွားနှင့်ယေရှု၏တစ်ဦးကိုကိုင်ဖမ်းပြီးကုန်အံ့သောအခါ "ဝိညာဏကြွက်သား" ဆောက်လုပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုနေို. ပြီးတော့သူကအားကစားရုံမှကျွန်တော်တို့ကိုပို့ပေး. သူကသနားကျွန်တော်တို့ကိုသူ၏စကားအားပေးမယ့်, မိမိလူတို့ကို, နှင့်ပင်သူ့အနားကို. ဒီတော့ဖတ်ကြကုန်အံ့, မိဿဟာယ, နှင့်ဆုတောင်း. သူတို့ရှေ့ဆက်သူတို့ထဲကဂိမ်းသို့မဟုတ်ပွဲစဉ်အဘို့ပြင်ဆင်ခံရဖို့လိုခငျြသောကွောငျ့အားကစားသမားခက်ခဲလေ့ကျင့်. သူတို့ကတစ်ဦးအဆင့်မြင့်မှာယှဉ်ပြိုင်နိုင်မည်ချင်.
ကြှနျုပျတို့အားလုံးဝိညာဉ်ရေးရာစမ်းသပ်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်ရပါလိမ့်မယ်, စမ်းသပ်မှုတွေ, နှင့်တိုက်ပွဲများနေ့စဉ်. သငျသညျပြင်ဆင်ထားဖြစ်ကြသည်? Coast အားကစားသမားများအတွက်အလုပ်မလုပ်ပါဘူးကြောင့်ခရစ်ယာန်များအတွက်အလုပ်လုပ်မည်မဟုတ်. ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကျမ်းစာဖတ်ရှုယခုနှစ်သင်ရေရှည်တည်တံ့ဖို့လုံလောက်တဲ့မဟုတ်ပါဘူး. ကျနော်တို့ကသာဘုရားသခင့်ကျေးဇူးတော်အားဖြင့်ဒီမာရသွန်မှတဆင့်လုပ်ပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမဲ့သူကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာလေ့ကျင့်ခန်းမှတဆင့်အပြေးပြိုင်ပွဲကိုပြင်ဆင်.
ငါ့ကိုသတိရဖို့အတှကျရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေ့ကျင့်ရေး၏အကျိုးကျေးဇူးများကန့်သတ်နေစဉ်ဒါဟာအထောက်အကူဖြစ်စေမယ့်, ဝိညာဉ်ရေးရာသင်တန်း၏အကျိုးကျေးဇူးများန့်အသတ်ရှိပါတယ်. ငါဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်၌ဆုတောငျးလသို့မဟုတ်စာဖတ်ခြင်းနဲ့တူမခံစားရဘူးသောအခါထိုကာလတွင်, ငါအကျိုးအတွက်သေးငယ်တဲ့သို့မဟုတ်ယာယီမဟုတ်ကြောင်းကိုယ့်ကိုကိုယ်သတိပေးနိုင်. ဒါဟာမသာလိမ့်မည်လာမည့်ရက်သတ္တပတ်အကြှနျုပျကိုကူညီ, ဒါကြောင့်လာမယ့်အသက်တာ၌အကြှနျုပျကိုကူညီပေးပါမည်. ဒါကကျနော်လိုအပ်သမျှကိုလှုံ့ဆျောမှုဖွင့်.
Theodora • မတ်လ 11, 2014 တွင် 10:40 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
Matt Smethurst • မတ်လ 11, 2014 တွင် 10:42 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ဒံယလေသ DryIce Reyes • မတ်လ 11, 2014 တွင် 10:44 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ခရီးစဉ်ကဒီအဘို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်. လွန်ခဲ့သောတစ်ပတ်သေမင်းကိုကွောကျရှံ့ခဲ့ကြရတယ်. ငါဘာကြောင့်မသိရပါဘူးဒါပေမယ့်ငါပြုမည်. ငါတကယ်ကောငျးကငျဘုံစဉ်အကောင်းဆုံးအရာတစ်ခုဖြစ်သည်နှင့်ဤမြေကြီးတပြင်ငါ့ကိုဘာမှမရလိမ့်မည်ဟုသတိပေးခံရဖို့လိုအပ်.
ရန် vizlyf • မတ်လ 11, 2014 တွင် 10:47 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ဤသည်ကြောက်မက်ဘွယ်ဖြစ်! ကျေးဇူးတင်ပါသည် fam! သငျသညျတိရစ်ဆာနျ!
GregBrown • မတ်လ 11, 2014 တွင် 11:06 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
အားပေးမှု၏ဤနည်းနည်းမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်! ကျွန်တော်တို့ကိုအချို့ကျန်းမာစားလေ့ကျင့်ခန်းအတူအစွဲအလမ်းဖြစ်လာရန်အဘို့အဒါဟာလွယ်ကူသည်. သို့သော်သင်သည်သင်၏အစားအစာနှင့်အားကစားရုံမှာစီစဉ်ကိုပိုမိုအချိန်ဖြုန်းကြပါ, ဆုတောင်းခြင်းနှင့်နှုတ်ကပတ်တော်၏လေ့လာမှုကာလထက်? သင့်ရဲ့ဦးစားပေးတက် messed ရှိသည်ဖို့လွယ်ကူပါတယ်ဒါဟာင်, ပင်မစ်ရှင်လယ်ပြင်ပေါ်.
Matt • မတ်လ 11, 2014 တွင် 1:18 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ငါသဘောတူတယ်. ဝိညာဏကြံ့ခိုင်ရေး / လေ့ကျင့်ခန်းဝေးလံ သာ. အရေးကြီးသောမည်သည့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြံ့ခိုင်မှု / လေ့ကျင့်ခန်းထက်, ဒါပေမယ့်ငါသည်လည်းနှစ်ဦးစလုံးအဖြစ်ကောင်းစွာတစ်ချိန်တည်းမှာလုပ်ဆောင်နိုင်တယ်ဟုယုံကြည်ကြသည်. ကျွန်မကိုယ်အဘို့အထဲကအလုပ်လုပ်နှင့်ဘုရားသခင်အဘို့အထွက်အလုပ်လုပ်အကြားဒဏ်ငွေလိုင်းလည်းမရှိကိုသိ, ဒါပေမယ့်ကွာခြားချက်ရှိပါတယ် (ယုံချင်ယုံမယုံချင်နေ). ဘုရားသခင်အဘို့အထဲကအလုပ်လုပ်, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ, ဝိညာဏဒြပ်စင်လည်းပါဝင်သည်. ဥပမာအားဖြင့်, သင်တစ်ဦးယလေ့ကျင့်ခန်းဖက်ရှိသည့်အခါ, သငျသညျနှစျခုဆွေးနွေးချက်အခါအားလျော်စွာသည့်အခါအတူတူသင်လေ့ကျင့်ခန်း. လျှင်မြင်ယောင်ကြည့်ပါ, အခါသင်နှစ်ခုဟောပြောပွဲ, ကစုပ်စက်တွေအကြောင်းမဟုတ်ပါဘူး, သင့်ရဲ့ကြွက်သားတွေ, စသည်တို့ကို. အစား, သငျသညျစကားပြောသည့်အခါ, သင့်ရဲ့နှလုံးထဲကစကားမပြောတတ်, နဲ့ခရစ်တော်အတွက်အချင်းချင်းမိဿဟာရှိ. ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်လုပ်ထဲကအားကစားရုံထဲမှာသူတို့အဘို့ဘုံအကျိုးစီးပွားဖြစ်နိုင်သည်, သင်မူကားဝိညာဉ်ရေးရာရှုထောင့်ပေါင်းထည့်လိုလျှင်, တစ်ဦး unearthly အဆင့်အထိသွားလာရင်းနှင့်သင်၏ကြံ့ခိုင်ရေး (ကျနော်တို့လို့ယူဆတယ်နေကြသည်ညာဘက်ဘယ်မှာ), ခရစ်တော်၏မေတ္တာတော်ကိုပြန့်ပွား. ကောလောသဲ 3:17
ကာဇီ • မတ်လ 11, 2014 တွင် 1:34 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဒါဟာသခင်ဘုရားဤမျှလောက်များစွာသောကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေထဲမှာပြောတတ်ပုံကိုအရမ်းအံ့သြစေတယ်. ငါ၏အတွေးနှင့်အတူလှန်ခဲ့သည် “ယနေ့ငါထွက်အလုပ်လုပ်သင့်တယ်” ဒါပေမယ့်ကျနော်ကျော်နောက်တဖန်ကျော်ကဒီဧရိယာမှာကျရှုံးနှင့်တူသော feeling နှင့်အတန်ငယ်ကြောင့်ဘဝမှာအဆက်မပြတ်တစ်ခုခုမဟုတ်ဘူးလျှင်အချိန်ဖြုန်းရနိုင်ခံစားရခဲ့သည်. ဤ blog Reading သူဘုရားသခင်ထံမှသတိပေးခဲ့>ငါနှင့်သောအခါငါဝိညာဉ်အားဖြင့်ကိုယ်တော်ကိုနှင့်ရထားအာရုံစိုက်, ငါဒါအများကြီးပိုကောင်းခံစားရဖျက်ဆီးကြောင်းကို၎င်းအချိန်မဟုတ်ရဲ့ယုံကြည်စိတ်ချ. ငါကျန်းမာတည်းခိုအရေးကြီးသည်ထင်ပေမယ့်ငါသူ့စကားလုံးသို့တူးဖော်ခြင်းနှင့်သူ့ကိုရှာကြံငါတို့အသက်အမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှဒုတိယကောင်းစွာရကျိုးနပ်ကြောင်းကိုငါသိ၏. ဘုရားသခင်နှင့်အတူအချိန်ဖြုန်းဘယ်တော့မှဖြစ်ပါတယ်. ခရစ်တော်သည်အမျှဝေဖို့သင်တို့ကိုခေါ်တော်မူပြီအဘယ်အရာကိုနာခံဖြစ်ခြင်းများအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်. ငါသည်ဤလိုအပ်. ဘုရားသခငျသညျသင်နှင့်သင့်မိသားစုခရီးစဉ်ကောင်းကြီးပေးတော်မူ!
ခရီးစဉ် Lee က • မတ်လ 11, 2014 တွင် 4:28 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
အကြွင်းမဲ့, တိုင်းတစ်ခုတည်းဒုတိယကရကျိုးနပ်သည်. သငျသညျအားပေးတိုက်တွန်းနိုင်ဝမျးသာ!
JB • မတ်လ 11, 2014 တွင် 2:00 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ထာဝရဘုရား • မတ်လ 11, 2014 တွင် 3:18 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဟေးခရီးစဉ်, ummm လှောက်နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းလှုံ့ဆျော byitself
Donnell • မတ်လ 11, 2014 တွင် 3:43 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
က Man ဒီကြောက်မက်ဘွယ်ပစ္စည်းပစ္စယဖြစ်ပါသည်, ငါသည်သင်တို့အဘို့အရပ်အဘယျသို့ခစျြ. ငါသည်သင်တို့၏ဂီတနှင့်ယခုသင့်စာအုပ်၌သင်တို့၏သွန်သင်ချက်ထဲကနေလေ့လာသင်ယူကိုချစ် “အဆိုပါကောင်းမွန်သောဘဝ”.
ခရီးစဉ် Lee က • မတ်လ 11, 2014 တွင် 4:26 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
MrsRondo • မတ်လ 11, 2014 တွင် 4:25 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဤသည်ကြောက်မက်ဘွယ်ဖြစ်ခဲ့သည်. ငါဒီနှစ်ရဖို့နဲ့ထိန်းသိမ်းထားဖို့မျှော်လင့်သော်လည်းကျွန်မ ပို. အရေးကြီးသောအခြားထက်သောတဦးတည်းနှင့်အတူရုန်းကန်အဆိုပါအရာနှစ်ခု. ကျေးဇူးတင်ပါသည်ခရီးစဉ်, သင့်ရဲ့အချိန်မီဘလော့ဂ်များအလွန်ဖှယျပါပြီ, သူတို့အဆက်မပြတ် Superstar စားသောက်ဆိုင်မှငါ့ကိုပြန်ထောက်ပြ.
Tee-ကောင်လေး • မတ်လ 11, 2014 တွင် 5:16 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
bro ဒီငါလိုအပ်ကဘာလဲ. ငါရုန်းကန်ခြင်းနှင့်ကာလ၏နောက်ဆုံးစုံတွဲတွေအတွက်စိတ်ဝိညာဉ်နှင့်အတူတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြရတယ်. ရုံဆုတောင်းဖို့မေ့လျော့, ငါ၏အကျမ်းစာဖတ်, ပင်ဘုရားကျောင်းကိုသွား. ဒါကပါတီအားတက်ခေါ်ဆိုခဖြစ်ပါသည်. ယခု မှစ. ငါသည်ခရစ်တော်အတွက်ပြောင်းလဲလူကိုပေါ့. ငါပင်ဖြစ်သောကြောင့်ငါ၏အတရားမဲ့အသက်တာ၏ဘုရားသခငျသညျဎရှည်ငါ့စကားကိုနားထောင်လိမ့်မယ်ထင်. ယရှေုသညျအကြှနျုပျအဘို့ကားတိုင်ပေါ်တွင်အသေခံခြင်းနှင့်ငါအမြဲရှေ့တော်၌ကြိုဆိုတာနဲ့သူပဲ, ငါ၏အပြစ်များကိုမှငါ့ကိုခွင့်လွှတ်ဖို့သစ္စာကိုသိ.
ငါသည်သင်တို့၏ဘဝနှင့်သူသူသည်သင်တို့ကိုတဆင့်လုပ်နေတာရဲ့အကြီးအလုပျအတှကျဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော် BRO. ဘုရားသခင်သည်မိမိအမှုအရာလက်ခံဘို့သင့်ကိုကောင်းကြီးပေးတော်မူ.
Keinya • မတ်လ 11, 2014 တွင် 5:31 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ပွိုင့်ကောင်းစွာယူ! ကျေးဇူးတင်ပါတယ်! = o)
RobJohnson • မတ်လ 11, 2014 တွင် 5:47 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
Liam • မတ်လ 12, 2014 တွင် 12:00 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
အစဉ်အမြဲစုံလင်သောအချိန်တွင်ငါ့ကိုရောက်ရှိဖို့သင့်ရဲ့ပို့စ်များကို trip. ဘုရားသခငျသညျသငျသညျမှတဆင့်ကျွန်ုပ်၏မိတ်ဆွေအလုပ်လုပ်ခွင့်သိမ်းဆည်းထားပါ
ယောရှုသည် Galvin • မတ်လ 12, 2014 တွင် 2:18 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ကျိန်းသေဒီ bro လိုအပ်. အားပေးမှုများအတွက်ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်.
Mistry • မတ်လ 12, 2014 တွင် 3:28 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
deeeeep struff ခရီးစဉ်, တစ်ခုခုကျွန်တော်များသောအားဖြင့်အကြောင်းပြောဆိုမရ. ကျေးဇူးပြု, လာမယ့်သင့်ရဲ့ပို့စ်များကိုစောင့်ရှောက်.
Vicmonyi • မတ်လ 12, 2014 တွင် 1:06 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
Tirsus • မတ်လ 13, 2014 တွင် 12:26 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဒါကကိုယ့်အတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ကပြွီးသူဖြစ်ကြောင်းကိုကျွန်ုပ်အသက်ကိုဖြစ်ပါသည်, ဘုရားသခင့ y ကခရီးစဉ်ကောင်းကြီးပေး!!
ရွှံ့ • မတ်လ 13, 2014 တွင် 12:35 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
Renee • မတ်လ 13, 2014 တွင် 9:54 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
အချိန်အစ်ကိုပေါ်မှာ Right. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်! ဘုရားသခင်သင့်ကိုကောင်းချီးပေးပါစေ!
ဆိုဖီ • မတ်လ 19, 2014 တွင် 5:14 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
အာမင်. ဤသတင်းစကားပေးပို့ခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်. ငါတို့ရှိသမျှသည်လိုအပ်. ချီးမွမ်းခြင်းကိုဘုရားသခငျသညျ.
E_Jay • မတ်လ 24, 2014 တွင် 2:09 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ဘုရားသခငျသညျဤအဘို့သင့်ကိုကောင်းကြီးပေးကြလော့။. ငါသည်သင်တို့ကိုလိုအပ်ကြောင်း yur အချိန်အတွက်လှုံ့ဆော်မှုများနှင့်အားပေးမှုကိုရှာဖွေဆုတောင်းပဌနာ… အာမင်
NIA • မတ်လ 24, 2014 တွင် 7:13 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ကောင်းသော Stuff. ဂရိတ်ကျမ်းပိုဒ်.
ရှောလမုန်သည် • မတ်လ 26, 2014 တွင် 6:55 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
LoganLong • ဧပြီလ 1, 2014 တွင် 11:45 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ငါသည်ဤယနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုအတွက်အလွန်သက်ဆိုင်ရာထင်တယ်. မကြာခဏဘယ်လိုသင်နာရီများအတွက်အားကစားရုံမှာကလူကိုမြင်ရကြဘူး? ခရီးစဉ်ကို, ငါဝိုင်အမ်စီအေမှာအလုပ်မလုပ်နဲ့ကျွန်မထွက်အလုပ်လုပ်အနည်းဆုံးတစ်နာရီထွက်သည်နှင့်နေ့ကအတူတူလူတွေနေ့ကတွေ့မြင်, ထက်ပေမယ့်ယေဘုယျအားဖြင့်ပိုပြီး. ထိုအသင်စဉ်းစားရရှိသွားတဲ့, ငါ၏အ Y ကိုသို့ရောက်ကြောင်းခရစ်ယာန်တွေကိုအများကြီးဖြစ်ကောင်းရှိပါတယ် (ကျနော်တို့ Indiana ပြည်နယ်၏အကြီးဆုံးပါပဲ), ဒါကြောင့်သူတို့ထဲကမည်မျှဖြုန်းနေကြတယ် 1-2 နာရီတစ်ရက်ဝိညာဉ်ရေးရာလှုပ်ရှားမှုထဲမှာသူတို့ကိုယ်သူတို့ထိတွေ့ဆက်ဆံ? ငါရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဝိညာဉ်ပုံသဏ္ဍာန်ပြန်ရရှိရန်လိုအပ်ခေါ်ဆိုမှုမှထွက်မယ့်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကငါ့ထံသို့သက်ဆိုင်ရာဖြစ်ပါသည်. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကို.
Logan Long က
Marjorie • ဧပြီလ 2, 2014 တွင် 12:20 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
Oritsegbemi • ဧပြီလ 17, 2014 တွင် 6:39 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ယောရှု • ဧပြီလ 26, 2014 တွင် 4:38 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ဒါကစကားလုံး-for-a-ရာသီဖြစ်ပါသည်. ယဉ်ကျေးမှုခုနှစ်တွင်အဲဒီမှာကောင်းသောကြည့်ဖို့ဤမျှလောက်များစွာသောလူမှုရေးဖိအားများကိုဖြစ်ကြပြီးယောက်ျားတွေမထိုက်မတန်နဲ့ 'ရိုက်ကူးခြင်း' 'ဖြစ်ဘို့, ကျနော်တို့ဒါကျွန်ုပ်တို့ကဲ့သို့ဖြစ်သင့်တယ်ထင်သောအရာကိုအတွက်ချီဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအားရနိုင်, အဘယ်အရာကိုအခြားသူတွေငါတို့သည်တူဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြ.
သူကရှမွေလသည်အားဖြင့်မင်းကြီးသည်ဘိသိက်ခံသောအခါဤသည်ဒါဝိဒ်၏ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ငါ့ကိုသတိပေး 1 ရှမွေလသည် 16). ဘုရားသခင့ကျမ်းပိုဒ်များတွင်ပြောပါတယ် 7, “ပြည်သူ့မျက်နှာကိုကြည့်ရှု, ထာဝရဘုရားမူကား, နှလုံးမှာကြည့်ရှုသည်။”
MannyRuiz • မေ 17, 2014 တွင် 2:05 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
တကယ်ပဲအားတက်စရာခရီးစဉ်! ဘုရားသခငျသညျငါ့ကိုသနီးကပ်လာရရှိသွားတဲ့တစုံတခုကိုမျှအမှန်တကယ်ငါ့ကိုပျော်ရွှင်မှုငါ့ကိုအားကောင်းလာစေရန်! ဒါကြောင့်သင်ကလူကိုကျေးဇူးတင်. ငါသည်သင်တို့ကိုတကယ်တန်ဖိုးထား. ငါသည်သင်တို့အဘို့ဆုတောငျးလကျြစောငျ့ရှောကျပါလိမ့်မယ် :)
Liam • ဇွန်လ 21, 2014 တွင် 10:27 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ခရီးစဉ်ငါထွက်အလုပ်လုပ်သို့ကြီးမားသောဖြစ်ကြောင်းကို, ငါမူကားတစ်ဦးအနေဖြင့်သည်တစ်ချိန်ကဒီ post ကိုဖတ်မှကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်သတိပေးရန်ရှိသည်. တကယ်အရေးပါအရာပေါ်အာရုံစိုက်ငါ့ကိုစောင့်ရှောက်ကူညီပေးသည်
ဘရိုင်ယန် • ဇူလိုင်လ 4, 2014 တွင် 9:33 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
wow ခငျြးဘလော့ဂါသကဲ့သို့ငါဒီအကြောင်းအရာကိုချစ်. ငါသည်တယလေ့ကျင့်ခန်းရိုက်ကူးခြင်းဖြစ်ကြောင်းကိုပေမယ့်တစ်ခါတစ်ရံတွင်ငါ၏အနှုတ်ကပတ်တော်ကိုနေ့စဉ်ဖွင့်ကောက်ဖို့အချိန်ကိုရှာဖွေတာထက်ပိုမိုလွယ်ကူလာ. ငါသင့်တူသောစမ်းသပ်မှုတွေအထိမခံမရပ်ကြဘူးအဘယ်ကြောင့်ငါထို့နောက်တွေးမိ. Awesome ကိုသတိပေးခကျြ. ကျေးဇူးတင်ပါသည်ခရီးစဉ်
gnocchi • ဇူလိုင်လ 21, 2014 တွင် 6:22 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဒါဟာတကယ်အားပေးအားမြှောက်သည်ငါ့စိတ်ထဲပေါ်ခဲ့သည့်အရာတစ်ခုခုခဲ့. ငါသည်ငါ့ကမျြးစာကိုနေ့စဉ်စာမဖတ်ကြဘူး, တကယ်တော့, ငါအဘို့အသွားနိုင်2သို့မဟုတ်3ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်နှင့်အတူထိတွေ့ရတဲ့မရှိဘဲရက်ပေါင်း…ယခုမူကားငါသည်ထာဝရအကျိုးခံစားခွင့်ငြင်းပယ်တာကိုကိုယ်သိရ. ဒါဟာဘယ်အရာကိုယနေ့ငါဖတ်ပါလာမယ့်သီတင်းပတ်အတွင်းသို့မဟုတ်နောက်လငါ့ကိုကူညီနိုင်လိမ့်မည်ဟုငါ့အားဤမျှလောက်ဆိုလိုတယ်. ငါပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကဘာလုပ်ခဲ့သလဲဆိုတာအပေါ်အားကိုးလို့မရပါဘူး, သို့မဟုတ်လွန်ခဲ့သည့်အပတ်က…ငါသည်ငါ့ထာထွက်အလုပ်လုပ်တယ်!!
ကျေးဇူးတင်ပါသည်ခရီးစဉ် Lee က, ဘုရားသခငျသညျသငျသညျမှတဆင့်အလုပ်လုပ်ခွင့်များအတွက်…Imma ပိုပြီးနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖတ်ရှု! :)
ဒေဗောရ • နိုဝင်ဘာလ 20, 2014 တွင် 12:26 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဒီ post Love! ငါလေ့ကျင့်ခန်းကိုချစ် & ငါသည်ဘုရားသခင်ကိုချစ်ပေမယ့်ကျွန်မရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာကြံ့ခိုင်ရေးကိုငါ့ဦးစားပေးကြောင်းကိုငါသိ၏.
Ngosa • ဧပြီလ 14, 2015 တွင် 6:33 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ကြောင်းကြောက်မက်ဘွယ်သတင်းစကားခရီးစဉ်ခဲ့, အစဉ်မပြတ်ငါထွက်အလုပ်လုပ်မှားယွင်းတဲ့သို့မဟုတ်မသို့မဟုတ်ရိုးရိုးမလိုအပ်သောဟုတ်မဟုတ်သိချင်ကြပါပြီ. သင့်ရဲ့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာတပေါ်မှဝေဟင်ရှင်းလင်းရေး. Thanx, BRAGING BRO ကိုစောင့်ရှောက်!!